Waxaan ku siin karnaa adeegyo habeysan oo tayo sare leh nayrooyinka 'Mc nylon pulleys' qaabab kala duwan iyo qeexitaanno sida loogu baahan yahay. |
Waxaan ku siin karnaa adeegyo habeysan oo tayo sare leh nayrooyinka 'Mc nylon pulleys' qaabab kala duwan iyo qeexitaanno sida loogu baahan yahay.
mc nylon pulley oo ah qalabka wiishka wiishka si balaaran loogu isticmaalay qalab wiishyo kala duwan ah, iyadoo si tartiib tartiib ah loogu badalayo goos gooskii hore ee birta faa'iidooyinkiisa gaarka ah. Nylon pulleys ayaa ciyaari kara door iskeed u saliideyn ah ujeedada ah in lagu beddelo birta caag ah
Magaca alaabta: Nylon riix of Crane dekedda Processing: wax taaj oo kale duray / shubay centrifugal / processing CNC
Midabka: Muunad Qaadashada Midab Qaali ah: Qiimaha Iibiyaha
Cirbadda: shubista sanduuqa dhexe
1 Miisaan fudud iyo dhisme ku habboon.
2. Ka-hortagga daxalka iyo dahaadhka.
3. Yaree buuqa iyo gariirka inta aad isticmaaleyso.
Kartida Bixinta: 3000 qaybood oo wiishyo wiish ah oo loogu talagalay wiishashka dekedda bishiiba
Faahfaahinta baakadaha Sida caadiga ah, waxaan isticmaalnaa filim xumbayn ah oo lagu daray sanduuqyo kartoon ah, haddii loo baahdana, santuuqyo alwaax ah ama sanaadiiq. Waxyaabaha yaryar waxaa lagu buuxiyaa bacaha is-shaabadaha + kartoonnada. Alaabada waaweyn waxaa lagu buuxiyaa boorsooyin alwaax ah + sanduuqyo alwaax ah. Waxaa loo istcimaalay injineernimada adkeysiga sare ee nylon flat flat sprocket
Qalabka nayloon ee xoogga sare leh ee heerka birta ah, adayg wanaagsan, xoqitaan hooseeya iyo xasilloonida kiimikada ayaa si fiican loo yaqaan. Marka lagu daro nylon MC oo leh astaamo guud oo ka mid ah waxyaabaha nylonka ah, sababtoo ah culeyskiisa molecular, crystallinity sare, guryaha farsamo ahaan farsamo ahaan aad ayey u fiican yihiin celcelis ahaan 1.5 jeer tan ay ku jiraan nylon. In ka badan caag injineernimada caadiga ah.
1, xoog farsamo sare, ayaa lagu dabaqi karaa mashiinada waaweyn;
2, xirato; is-saliidayn wanaagsan, MC nylon pulley wuxuu xirtaa nolosha marka loo eego birta, birta, pulley 4-5 imes ka sareeya.
3, iyada oo aan loo eegin labada qalab, soo saarida mashiinada wax qaadaya, xarig silig bir ah oo nolosha dheereeya 10 jeer;
4, si loola jaanqaado heerkulka ballaadhan, -40 ° C -100 ° C ee la adeegsanayo;
5, tamar lumis, buuq la'aan, hawlgal habsami leh.
6, is-bakhtiiye, isticmaalka badbaadada;
7, iftiin, cufnaanta birta 1/7, naxaas 1/8,1 / 2.5 aluminium, daxalka u adkaysta, ma miridhku;
8, waxqabadka mashiinka, xasiloonida sare ee foomka.
Hore: Bixiyaan adeegyo habeysan oo tayo sare leh wiishka nylon wiishka qaabab kala duwan iyo qeexitaanno sida loogu baahan yahay ah
Xiga: Ku wareeji wershadaha si ay u soo saaraan giraangiraha hagaha naaska leh ee tayo sare leh
Crane nylon isweydaarsiga
Wiishka wiishka wiishka
Nylon pulleys iib ah
Port wiish nylon pulley
Giraangiraha yaryar ee nylon
bixiyaan adeegyo habeysan oo tayo sare leh ele ...